Nke a bụ nkọwa nke akwụkwọ si Amazon:
De blọgụ aghọwo oge na-ewu ewu ma na-adọrọ mmasị maka ọtụtụ, mana ọtụtụ ndị na-ede blọgụ na-achọta na ọ pụkwara ịbụ isi iyi kachasị mma nke ego na-akpata ma ọ bụ na-enweghị isi. Ọ bụ ezie na ihe mgbochi ịmalite blog dị obere, na-enweghị nduzi ọkachamara, ọ na-adị mfe iwe iwe ma ọ bụrụ na ịga nke ọma adabaghị na atụmanya. Edere site na onye okike nke ihe ntanetị # 1 nke ụwa iji nweta ego na blọọgụ, ProBlogger na-ewere onye na-agụ ya site na mbido zuru oke iji nweta ego ma ọ bụ n'ihi ịde blọgụ. Site na usoro nkuzi bara uru site n'aka onye na - agụ ya ga - ahọrọ isiokwu blog, nyochaa ahịa, melite blog, kwalite ya wee nweta ego.
Ekele Darren na Chris na nke a isi ọhụrụ na akụkọ Problogger! Ọ dị na ndepụta ihe m chọrọ!